Basketball: LeBron Jemes Oo Dhibbane U Noqday Khaladka ciyaartooyada – Video
HomeNBABasketball: LeBron Jemes Oo Dhibbane U Noqday Khaladka ciyaartooyada – Video
05/03/2015 Abdiwahab Ahmed
Laacibka madow ee LeBron James ayaa dhibbane u noqday khaladka ay ka galaan ciyaartooyada ay iska soo horjeedaan, waxaana Arbacadii loo geystay khalad halis ku noqday caafimaadkiisa ciyaar ay kooxdiisa Cleveland Cavaliers isaga hor yimaadeen Roronto Raptors, taas oo ay kooxda James ee Cleveland ku badisay 120-112,
Laacibka dhexda uga ciyaara Toronto ee Jonas Valanciunas ayaa hoosta ka galay James oo gool qurux badan ka dhalinayay, waxaanu sameeyey mid ka mid ah khaladdada halista ku ah xirfadleyaasha kubadda gacanta ee Basketball, isagoo intuu labada gacmoodba ula tegay xoog u tuuray LeBron oo hawada sare ku jira, isla markaana ku maqan goolka uu dhalinayay.
Khaladkan oo dhacay iyadoo ay qaybtii saddexaad ee ciyaarta ka hadhsan tahay LeBron Jame 18.8 ilbidhiqdsi, waxaana mar kale uu khaladkani xasuusisay mid kale oo laba toddobaad ka hor laga galay ciyaartoygan lagu tilmaamo ninka ugu wanaagsan ragga ciyaara kubadda Basketball.
LeBron James ayaa markii ay ciyaartaasi dhamaatay waxa uu la hadlay warbaahinta, waxaanu sheegay in wixii hadda ka dambeeya uu ku dedaali doono in uu iska ilaaliyo khaladaadka lagu galo, isla markaana ay muhiim tahay in uu naftiisa badbaadiyo.
Axaddii toddobaadkan ciyaar dhex martay Cleveland iyo Houston ayaa laga calaamadiyey khalad dadku la yaabeen. LeBron James oo kubadda ciyaaraya ayuu laacibka James Harden laag xoog badan ka qabadsiiyey kuraanta, taas oo uu ku mutaystay in laga ganaaxo hal kulan.
James oo laaggaas ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: “Ma doonayo in aan ka hadlo arrintaas in badan sababtoo ah ma doonayo in aan anigu noqdo nin arrinta kor u qaada, laakiin waxa jira ciyaartooyo badan oo aan ahayn ciyaartooyo ciyaara basketball kaliya” sidaas ayuu yidhi James.
LeBron waxa uu intaa raaciyey: “Hore ayaan u sheegay in ciyaartu aanay ahayn Basketball kaliya, laakiin garsooreyaasha ayey tahay in ay arrinta eegaan. Waxa ay go’aamiyaan waxa khaladka ah iyo waxa aan ahayn, waana sida la innagu xukumo. Laakiin aniga waxa ila gudboon, in aan diiradda saaro oo aan fahmo muhiimadda ciyaarta, iyo sidoo kale, in aan naftayda illaaliyo.”
Tababaraha kooxda Cleveland Cavaliers, Mr. David Blatt ayaa sheegay in kooxaha ka soo horjeeda kooxdiisu ay inta badan bar-tilmaameedsadaan LeBron James.
“Ma filayo in ay wax cusub tahay, waa wax sannado badan soo jiray, sababtuna waxa weeye, LeBron waa nin awood badan, dhiirran oo xoog weyn, dad badan ayaa ku dhaca oo aanay garsooreyaashu qabanin. Waxa kale oo jira khaladaad kale oo aan wax weyn laga soo qaadin, waayo qofka lagu khaldamay waa LeBron James: ninka awoodda badan, xoogga weyn, weeraryahanka ah.”
Tababare Blatt waxa uu u sheegay garsooreyaashii dhexdhexaadinayey ciyaarta Cleveland Cavaliers iyo Roronto Raptors in ay qaadi karayeen tallaabooyin ay ku ilaalin karayeen James.
Jonas Valanciunas oo ay isaga warbaahintu weydiisay khaladka uu sameeyey iyo sida ay wax u dhaceen, ayaa waxa uu ku adkaystay in haba-yaraatee aanu khaladkiisu halis gelinin LeBron.
“Maan dooneynin aan waxyeeelo, waxa aan isku dayayey uun in aan ka joojiyo kubadda uu dhalinayo, iyo waliba in aan ka qabto Riinka, intaas oo kaliya ayaan sameeyey. Shaqadayda ayaan qabsanayay ee ah in aan ilaaliyo Riinka, mana doonayo in aan qofna dareenkayga siiyo, khalad yar oo lagu sameeyo ciyaartoygaasna (LeBron) ma joojinayo.” Sidaas ayuu yidhi Jonas Valanciunas.
Perkins ayaa isaguna arrinta si kale u arka, waxaana uu aaminsan yahay in khaladkaasi ahaa mid fool xun oo si uskagnimo leh loo sameeyey.
Jonas Valanciunas ayaa markii uu James beerka dhulka ku dhuftay, isla markaana gacanta midig wax ka nqoday, waxa uu isku dayey in uu caawiyo, laakiin LeBron ayaa iska diiday.
“Sidee ayuu ii caawin karaa, iyadoo ay ciyaartooyadaydii ila joogaan” sidaas ayuu yidhi James oo ka jawaabayay su’aal laga weydiiyey sababtii uu u diiday gacantii uu u fidiyey Jonas Valanciunas.
James Jones, oo ay afar sannadood LeBron James u wada ciyaarayeen kooxda Miami, ayaa sheegay in marar horeba uu arkay khalad noocan oo kale ah oo laga gelayo.
“Dabcan waa bartilmaameed” sidaas ayuu yidhi Jones, waxaanu intaa raaciyey: “Waa in aad fahamto in James uu yahay ciyaartoyga ugu wanaagsan kubadda (Basketball), isagaa hore noo wada. Sidaas daraadeed, qof kasta oo naga soo horjeedaa in ay joojiyaan ayay ku fikiraan ama ay yareeyaan awooddiisa, si ay ciyaarta nooga xumeeyaan. Markaa waanu filannaa in aanu aragno, wax ka duwanna may ahayn tani” sidaas ayuu yidhi James Jones.
Daawo Video – mid ka mid ah khaladkii laga galay
Maxaad Ka Taqaan Garoonka Roomaankii ka dhisay Turkiga ee Aspendos.?
08/11/2015 jambiir sultan
Video : Tartan Kubada Kolayga Ah Oo Berbera Lagu Soo Gabo-gabeeyey
Mohamed Elneny Oo Tababarkii U Horreeyey La Qaatay Arsenal, Amaanta Wenger Iyo Filashadiisa
14/01/2016 Abdiwahab Ahmed